I-Luxury Car Coach Rentals Odisha | Amakhulu eZithuthi eziThengisiweyo
Umqeqeshi weeNqwelo zeeMoto uOdisha
Imoto yokuqasha iyintsikelelo yosuku njengoko sinokuyisebenzisa ngokubanzi ukuguquguquka kunye nenkululeko yokuhamba njengemoto yethu yangasese. Ukuphumla nokuzilibazisa ngumsebenzi obalulekileyo kulabo bafuna ukufunda nokuphucula ngaphandle kokuhlala bephilile. Ukutyelela ngumthombo ongcono kakhulu wokufunda ngexesha lokuzonwabisa; ngakumbi kubantwana bethu, kodwa kwakungeke kube lula kwi-Odisha, ukuba Umqeqeshi weeNqwelo zeeMoto uOdisha bekungayi kuba khona.
Iitye zeeNtshontsho zeNtshontsho igosa lokuhamba kwendawo ukubonelela ngeenqwelo zokuqesha izithuthi kwi-Odisha. Siyaqinisekisa ukuba zonke iinkonzo zokuhamba ziphathwa ngokunyamekela kunye nokuxhamla. Amava akho nathi asoloko esenza unqwenele ngakumbi njengoko sinikela ngemoto ye-state-of-art kunye nabaqeqeshi abaqashisayo kwi-Odisha. Sineenqwelo ezinkulu zezithuthi enkonzweni yakho ukujongana nommandla onzima kunye nendawo enzima yeOdisha. Izithuthi zethu zixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko ezenza ukhululeke kulo lonke uhambo. Awunakukhathazeka malunga nokuba uwedwa okanye kunye neqela labahlobo, nokuba liqela elikhulu okanye iqela elincinci, kwaye nokuba yintoni na imeko enokuthi sinakho ukuhamba ngendlela efanelekileyo kakhulu enokuthi ilandele iifowuni yakho kunye nelayiyo.
Umqeqeshi weeNqwelo zeeMoto uOdisha uchazwe ngezantsi: -
I-Fleet yeeVangeli eziVakalisiweyo zeC AC kunye nabaqeqeshi
Iimoto: I-Mercedes Benz, i-BMW, ​​i-Fortuner, i-Corolla Altis, i-Honda City, i-Honda BRV kunye ngokufanayo.
Abaqeqeshi: i-13, i-19, i-27, i-41 ne-45 i-seaters branding brand.
Izithuthi zingaphantsi kweminyaka emithathu ubudala kwaye zinesixhobo sokukhusela / iibhanti, iikiti zokuncedisa okokuqala, amanzi aManzi kunye nezinye izinto ezibalulekileyo.
IiNkonzo zihlala kwi-24 Hrs / i-7 iintsuku ngeveki
Abaqhubi bafundela, banolwazi kwaye banamafowuni okulungelelanisa.
I-Sand Pebbles yi-Operator yezokuThunywa ezisemthethweni yezindlu ezininzi zeSizwe kunye neeNinzi zeSizwe.
uphando Us / Uqhagamshelwano nathi